Dhageyso” Madaxweynaha Maamulka Puntland oo faah faahiyey Safar shaqo ugu ambabaxay dalka Shiinaha. | Baahin Media
Dhageyso” Madaxweynaha Maamulka Puntland oo faah faahiyey Safar shaqo ugu ambabaxay dalka Shiinaha.
May 26, 2019 - jawaab
Madaxweynaha Maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo soo gebagebeeyey safarkiisii gobolka Mudug ayaa Maanta oo Axad ah safar shaqo ugu ambabaxay dalka Shiinaha.
“Waxaan maanta safar shaqo ugu ambabaxay dalka China aniga iyo wefdi Wasiiro ka kooban oo ila-socda, safarkaasi waa safar ka kooban sidii wax wadaqabsi noo dhexmarilahaa gobol kamida gobolada China ee dhinacyada horumarinta ganacsiga iyo kala faa’iidaysiga khibradaha ee dhismayaasha wershedaha iyo xoojinta xidhiidhka ganacsi ee naga dhexeeya.”
“Waxaan rajaynaynaa mudadaas aan joogno inaan aragtiyo fiican kala soonoqondoono, Iyagana aan u sharixidoono fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Puntland ay leedahay, waxaan aad ugu faraxsanahay in dalalka ka qayb-qaata koboceena dhaqaale inay yimaadaan dalkeena, iyagoo usoo maraaya sharciga iyo nidaamka dowliga ah, Puntland waxay balanqaadaysaa dhankeeda inay fududayso waxkasta oo horumarka ka qayb-qaadanaya”. Ayuu yiri Madaxweyne Deni.